Wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya oo laga helay COVID-19? - Awdinle Online
Wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya oo laga helay COVID-19?
Wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa sheegaya in laga helay cudurka COVID-19 uuna ku jiro isa soocid maalintii siddeedaad.
Wasiirka ayaa hadalkan u sheegay telefiishanka dawladda Soomaaliya. Wasiirka ayaa sheegay inuu ku sugan yahay dalka Burundi, oo uu kaga qaybgalayey shir, halkaasi oo uu sheegay inuusan ka bixin degaanka uu ku sugan yahay.
Wasiirka ayaa hadalkan sheegay isagoo ka hadlayey in cudurka COVID-19 uu aad ugu faafay Soomaaliya. Waxa uu sheegay inaysan caqli keenayn in la yiraahdi dibadbax ha la isku yimaado, sida uu hadalkiisa u dhigay.
Mas’uuliyiinta mucaaradka ayaa sheegay inay qabanayaan bannaanbax cusub maalinta Jimacaha 26-ka Febraayo ee toddobaadkan.
Previous articleWakiilka Qaramada Midoobay oo gaaray Kismaayo
Next articleDowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday in an la qaban karin banaanbax